Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweynaha Germany oo Booqasho ku tagay Ethiopia islamarkaasna ka hadlay Xuquuqda Aadamaha ee Dadyowga ku hoos Nool Ethiopia
Madaxweynaha Germany oo Booqasho ku tagay Ethiopia islamarkaasna ka hadlay Xuquuqda Aadamaha ee Dadyowga ku hoos Nool Ethiopia
Madaxweynaha Wadanka germany Joachim Gauck ayaa booqasho ku tagay wadanka Ethiopia socon doonta 4 maalmood. Waxa uu booqashadan kula kulmay Raisal wasaaraha Cusub ee Ethiopia isaga oo arki doona Madaxweynaha Ethiopia iyo sidoo kale Waxa uu la kulmi doona oo ka qudbadeyn doona AU oo horjooge ka tahay Nkosanzana Dlamini-Zuma oo kasoo jeeda wadanka Koonfur Afrika.
Socdaalka Madaxweynaha Germany ayaa xiiso gooni ah leh isaga oo la kulmaya ururada bulshada ee dalka Ethiopia iyo waliba majlisyada Diimaha ee Muslimiinta iyo Kiristaanka. Madaxweynaha ayaa sheegay innuu la hadli doona Ururada bulshada ee u ololeeya shacabka (Civil Societies) isaga oo kala hadli doona Arrimaha Xuquuqul insaanka iyo xuquuqda assaasiga ah.
Xuquuqul Insaanka Ethiopia
Gumeysiga Ethiopia ma u ogolyahay dadkaas inay la kulmaan Madaxweynaha Germany si xor ah ma u dhiiban karaan fikirkooda? waa maya diplomasiyiinta la socota socdaalkan madaxweynaha waa la socdaan arrintaas, si kasastaba ha noqote waa talaabo isku day ah, waxaana suurto gal ah in xogo badan oo ka qarsoona indhahooga ay kusoo arki doonaan!
Haayadaha Xuquuql Insaanka ee wadanka germany ayaa qoraalo u diray Madaxweynaha Germany iyaga oo la socodsiinaya dhibaatada ka jirta wadanka Ethiopia iyo tacadiyada ay ku hayaan shacabkaas. warqadaha loo gudbiyay madaxweynaha ayaa waxa kamid ah warbixin dheer oo looga hadlayo xasuuqa kasocda Ogadeniya, Cunaqabataynta ay gumeysiga Ethiopia ku hayso shacabka somalida Ogadeniya. Sidoo kale waxaa si faah faahsan loogu sharaxay cunaqabatayna dhanka saxaafada ah ee ka jira Ethiopia, Maxabiista faraha badan ee kamaidka yihiin Journalistayaasha ee ku jira Jeelasha iyo dadka loo heysta Siyaasada ee dilka iyo jidh dilka loo geysto.
Waxaana haayadahan xuquuql insaanku ka codsadeen Madaxweynaha Germany innuu cadaadis saaro wadanka Ethiopia sidii cunaqabatayna looga qaadi lahaa bulshada rayidka ah, islamarkaasna Taliska Ethiopia u illaalil lahaayeen xuquuqda Bani aadamka.
Raisal wasaraha germany ayaa sidoo kale ummada Muslimiinta ah ee Ethiopia la kulmi doona isaga oo dhageysan doona cabashada Muslimiinta Ethiopia oo waxbadan ka tabanaya taliska Ethiopia.
Socdaalka Madaxweynaha Germany ayaa laga yaaba in looga wada hadlo sidii loo soo nooleyn lahaa xidhiidhka Ethiopia iyo u dhaxeeya Wadanka Germany oo gaabis weyn galay kadib markii Raisal wasaarihii hore ee Ethiopia kula kacay shacabka Ogadeniya xasuuq aar goosi ah iyo guud ahaanba tacadiyada uu ka geystay Ethiopia laga soo bilaabo sanadkii 2005.
Diplomasiyiinta la socota Madaxweynaha ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in wax isbadal ah uusan ka dhicin Ethiopia dhimashadi Males Zenawi intii ka danbeysay oo cadaadiski iyo kutumashadi xuquuqda bani aadamka ay halkeedi tahay. Waxbadana aan laga rajeyneyn inay iska badalaan.
Sikasta ha noqote waxaa safarka Madaxweynaha ugu weyn qudbad uu ka jeedin doono Xarunta Midowga Afrika isaga oo ka hadli doona arrimo badan oo xuquuqul insaanka iyo maamulka wanaagsan ku saabsan. Waxuu ka hadli doona in Dhibaatada Afrika ka jirta ay xalin karaan Afrikaanka laftigiisu (African Solution for African Problems). Wadanka Germany ayaa taakulo gaadheysa $220 million oo kaalmo ah siiyay Xarunta Midowga Afrika laga soo bilaabo sanadkii 2006. Lacagahaas oo loogu deeqay sidii Midowga Africa u diyaarin lahaa Barnaamijyo lagu nabadeeyo oo lagu raadiyo xal goobaha daggaalku ka jiraan iyo Barnaamijyo kaleba isugu jira.
Shacabka Ogadeniya maxuu ka faa idaya Booqashada Madaxweynaha Germany
Germany waa wadan aqoon badan u leh dhulka Ogadeniya, waana wadankii Afrikaanka lagu qeybsaday sanadkii 1884( Scramble For Africa). haayadaha Xuquuql insaanka Wadanka germany iyo Haayadaha Dowliga ah iyo kuwa aan dowliga aheynba waxay macluumaad badan ka bixiyeen Xaalada dhabta ah ee kajirta Ogadeniya. Safarka Madaxweynaha Germany waxaa kujira arrimo badan oo wax laga baran karo.
Marka kowaad Madaxweynaha Germany waa innuu cadaadis saaro taliska Ethiopia sidii xal waara oo siyaasadeed looga gaadhi lahaa qadiyada Ogadeniya.
Marka xigta waa in culeys uu ku saaro wadamada Midowga Afrika inay talaabo ku haboon oo kaalintooda ah ka qaataan sidii Qadiyada Ogadeniya iyo Gumeysiga Ethiopia u dhex dhexaadin lahaayeen.
Intaas oo dhan waxaa iyana la ilaawi karin dadka ku tuntay xuquuqda Bani aadamka in la hor keeno maxkamad. Islamarkaasna Gumeysiga Ethiopia muujiyo innuu ilaaliyo xeerarka Caalamiga ah ee u yaala xuquuqda Aadamaha.
In madaxweynaha Germany uu ka hadlo Xuquuqda asaasiga ah ee shacabka Ethiopia waa mid horumar ah oo shacabka Ogadeniya iyo Guud ahaanba dadka ku hoos nool gumeysiga Ethiopia ay ku farxayaan soona dhaweynayaan.